(Antokon'ny Kongresistan'ny Fahaleovantenan'i Madagasikara) tato anatin’ny 5 taona. Anisan’ny antoko naharitra indrindra teto ny AKFM izay efa tany amin’ny 1958 no nijoroany. Sekretera nasionaly izy taorian’ny fahalasanan’ny sekretera jeneraly Gisèle Rabesahala. Voafidy ho filoha nasionaly izy ny novambra 2019 nandritra ny kongresin’ny antoko. Efa nitantana ny tanora KDRSM, sampana tao anatin’ny AKFM. Mpikambana tao anatin’ny sendika FISEMARE (Fiombonan’ny sendika Sendika Revolisionera Malagasy) ary niandraikitra ny resaka lalàna. Nianatra momba ny banky tany amin’ny Firaisana Sovietika teo aloha izy. Rehefa tafaverina teto Madagasikara, dia tsy dia niditra tamin’io sehatra nianarany io fa nisehatra bebe kokoa tamin’ny politika tao anatin’ny antoko AKFM. Nirona tamin’ny firehana sosialista ary mbola mitazona izany hatramin’izao, na nisy aza ny fivakisana roa tany amin’ny 1989 ka nahateraka ny AKFM fanavaozana. Tsy dia mankasitraka loatra ny “mondialisation” sy ny “globalisation” na ny fidiran’ireo mpandraharaha vahiny eto Madagasikara, izay ambakainy ho mpandroba ny firenentsika. Tsy mankasitraka ihany koa ny fiarahana amin’ny Banky Iraisam-pirenena sy ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI). Amin’izy ireo dia ny otrikarena eto Madagasikara ihany no ivelomantsika, ary ny orinasa eto no omena lanja. Efa tonian-dahatsoratry ny gazety Imongo Vaovao ary nivoy izany foto-kevitra izany izy. Rahampitso zoma ny fandevenana ny nofo mangatsiakany eny amin’ny fasan-drazany Manjaka Ilafy, Antananarivo Avaradrano. Isika eto amin’ny Gazety Tia Tanindrazana dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany manontolo.